अमेरिकी ब्यवस्थापकहरू बिग्रेका छन् ... | Martech Zone
अमेरिकी प्रबन्धकहरू बिग्रेका छन् ...
बिहीबार, अक्टुबर 20, 2005 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
अमेरिकी प्रबन्धकहरू बिग्रेका छन्। केहि ब्रेटहरू हुन्।
एक टापुमा प्रबन्ध कल्पना गर्नुहोस्। तपाईको टापुमा मानव संसाधन सीमित छ, केहि घण्टा टाढा टाढा थियो र तपाई बिभिन्न भाषा बोल्नुभयो। मातृभाषा र टापुका कारण तपाईको टापुमा कर्मचारीहरुलाई आकर्षित गर्न गाह्रो छ। यस टापु ओरिएन्ट वा क्यारिबियनमा छैन, चिसो र ओसिलो छ केही महिना मात्र दिउँसोको प्रकाश प्रदान गर्दछ। हुर्कदै, तपाईंको कर्मचारीहरूलाई दुई अन्य वैकल्पिक भाषाहरू बोल्न सिकाइएको छ किनकि तपाईंको भाषा तपाईंको टापु बाहिर थोरै चिनिन्छ।
एक व्यवस्थापक र टापु को एक सदस्य को रूप मा, यो तपाइँको जिम्मेवारी हो कि तपाइँहरु को लागी काम गर्न को स्थिति मा सार्न जहाँ तिनीहरू सफल हुन सक्छन्। तपाईंले कर्मचारीहरू राख्न कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ; किनभने यो उनीहरूको घर भएता पनि तिनीहरू टापु छोड्न सक्दछन जब तिनीहरू अन्य अवसरहरू पछ्याउन चाहन्छन्। तपाईको कर्मचारीमा तलब र स्रोतमा दुबै पैसा लगानी गर्नु पर्छ। प्रत्येक कर्मचारी प्रति वर्ष weeks हप्ताको छुट्टीको साथ सुरु हुन्छ। तपाईं द्रुत रूपमा मानिसहरूलाई प्रमोट गर्न सक्षम हुनुहुने छैन किनभने कर्मचारी कारोबार र आक्रोश तपाईंको व्यवसाय गाड्न सक्छ।
टापु आइसल्याण्ड हो। शहर रिक्जाविक हो। यो एक आकर्षक देश हो। यसका मानिसहरू संस्कृति, इतिहासमा धनी छन् र उनीहरूसँग विश्वमा स्वास्थ्य र धनी संस्कृतिहरू मध्ये एक छ। माछा मार्ने र पर्यटन आइसल्याण्ड मा शीर्ष उद्योग हो। तिनीहरूसँग संसारमा सब भन्दा राम्रो समुद्री खाना छ। यस टापुमा हिमनदीहरू, गिजेरहरू, लाभा क्षेत्रहरूसम्म आकर्षक भौगोलिक सुविधाहरू छन्।
मेरो कम्पनीले मलाई यस हप्ता आइसल्याण्डमा हाम्रा ग्राहकहरु मध्ये एकलाई सहयोगको लागि पठायो। हामी अवतरित भएको समयदेखि हामी डराएका थियौं। संगठनको संस्कृति, व्यावसायिकता र कर्मचारीहरूको समर्पण मैले कहिल्यै काम गरेको कुनै अमेरिकी कम्पनी भन्दा धेरै भिन्न थियो। तथ्य यो हो, मलाई लाग्छ कि हामी बिग्रिएका छौं।
अमेरिकामा, यदि तपाइँ तपाइँको कर्मचारीलाई मन पराउनुहुन्न भने तपाइँ केवल तिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पठाउन भन्नुहोस्, वा उनीहरूले छोड्ने पर्याप्त असुविधाजनक बनाउनुहोस्। यदि तिनीहरू उत्पादनशील छैनन् भने, तपाईंलाई संसाधनहरू लागू गर्न आवश्यक पर्दैन केवल एक नयाँ पाउँनुहोस्। यस राष्ट्रमा हाम्रो उत्पादकता विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ तर यो हाम्रो महान प्रबन्धकहरूको कारणले होइन। यो किनभने हामीसँग मानिसहरुको विशाल स्रोत छ। यसको मतलब यो हो कि हामीलाई प्रबन्ध गर्न आवश्यक छैन। हामी नेतृत्व गर्न आवश्यक छैन। हामी कम्पनीको दीर्घायु एक सम्पत्तिको रूपमा हेर्दैनौं किनभने कर्मचारीको साथ लामो समयसम्म कम्पनीमा हुन्छ; हामी तिनीहरूको कमजोरीका लागि तिनीहरूलाई लक्षित गर्दछौं।
हामीले भ्रमण गरेको ग्राहक एक अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगमा एक लाभदायक व्यवसाय हो जुन व्यावहारिक रूपमा कहिँ पनि फ्लोरिंग हुँदैछ। उनीहरूले हामी भन्दा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्छन्। वास्तवमा, हाम्रो देश मा आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफ्नो रणनीतिक व्यवसाय योजना को एक हिस्सा को रूप मा दिवालिया जान सक्छ! तिनीहरू गुणस्तरमा ध्यान दिन्छन्, जबकि उनीहरूका प्रतियोगीहरूले मूल्यमा केन्द्रित गर्छन्। उनीहरूसँग दीर्घकालीन रणनीतिहरू छन्, जबकि उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरू आजको शेयर मूल्यको बारेमा चिन्तित छन्। तिनीहरूको जीविकाको लागि यसको आवश्यकता छ, र तिनीहरूले डेलिभर गर्छन्।
सबै क्षेत्रहरूमा, तिनीहरूको संस्कृति र तिनीहरूको वातावरणको कठिनाइले उनीहरूले अझ राम्रो बजार बजार, राम्रो व्यवसायिक मानिसहरू र सबै भन्दा राम्रो व्यवस्थापक हुन चाहन्छ। हामी दर्जनौं कर्मचारीहरूसँगको बैठकहरूमा बस्दा, हामी भन्न सक्दैनौं कि कुन फ्रन्ट लाइन थियो र कुन वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू - तिनीहरू सबै ज्ञानी, प्रतिबद्ध, भोकल, र व्यस्त थिए।
मेरो क्यारियरमा मैले १ वा २ प्रबन्धकहरू भेटेको छु जुन यस वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन सक्छ। दुःखको कुरा, हजारौं अन्य मैले सँगै काम गरेको मैनबत्तीलाई समात्दैन। इमान्दार हुन, मलाई लाग्छ कि म उत्तरार्द्धहरु मध्ये एक हुँ। म पक्का छु कि म त्यहाँ सफल पनि हुन सक्छु।
हाम्रा प्रबन्धकहरू बिग्रिएका छन्। तिनीहरूलाई प्रबन्ध गर्न आवश्यक पर्दैन, तिनीहरूलाई उनीहरूको वातावरणमा अनुकूलताको आवश्यकता पर्दैन उनीहरूले नेतृत्व गर्न असमर्थता मास्क गर्न वातावरण परिवर्तन गर्दछन्। केही व्यवसायहरूमा, कर्मचारी कारोबार एक फाइदा पनि हो किनभने यसले तल भुक्तान गर्न सक्दछ। कसै-कसैलाई विश्वास छ कि नयाँ अनुभवीलाई राख्नको लागि सस्तो छ।
माईक्रोसफ्टका पूर्व चीफ साइन्टिस्ट नेथन मायहरवल्डले भने, â ?? शीर्ष सफ्टवेयर डेभलपरहरू औसत सफ्टवेयर डेभलपरको तुलनामा बढी उत्पादक हुन्छन् १० १० वा १० एक्स, वा १००० एक्स, तर १०,०००x को कारकबाट होइन। मँ निश्चित छु यो कथन धेरै जसो संगठनहरुमा दोहोर्याउन सकिन्छ तथ्य यो हो - राम्रो रोजगार मूल्यवान छैन अझ बढी अन्य कर्मचारीहरू भन्दा उनीहरू मूल्यवान छन् अधिक बढि.
हाम्रो विश्व एकीकृत गर्न जारी रहँदा, हाम्रो टापु सानो हुँदै गइरहेको छ। अमेरिका अब विश्व बजारको ग्राहक बनिरहेको छ र हामी आफ्नो व्यवस्थापकलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म सफल हुने छैनौं। आइसल्याण्डले प्रदर्शन गर्न चाहेको कुरा हाम्रो देशको लागि भविष्यमा धेरै टाढा छैन। हाम्रो राम्रो कर्मचारीहरू र प्रबन्धकहरू उनीहरूको मूल्यलाई महत्त्व दिने कम्पनीहरूले लैजाने छन्। खराब ब्यवस्थापकहरूले उनीहरूको खराब कम्पनीहरूलाई मैदानमा सवारी गर्नेछन्।
टैग: अमेरिकावैश्विकविश्व अर्थव्यवस्थाआइसल्याण्डअन्तर्राष्ट्रियव्यवस्थापनप्रबन्धकविश्व
हेरचाह गर्ने रणनीति?
ब्लग तताउने माथि